Injabulo ewina imoto emncintiswaneni wakwa Spar | News24
Injabulo ewina imoto emncintiswaneni wakwa Spar
PHOTO: Nokuthula khanyile Owine umncintiswano wemoto ehalaliselwa abaphathi bakwa Spar, kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla uIvan Pather oyiRegional Manager e-KZN, kube uJabulani Ncalane owine imoto bese kuba uAbigial Mhlamvu oyimenenja yakwa Spar eSelgro Centre.
IBIBHALWE ebusweni injabulo kuMnuz Jabulani Ncalane (36) wase Scottsville oziwinele imoto emncintiswaneni wakwaSpar.
NgoMsombuluko ekuseni uMnuz Ncalane osebenza eLife Hospital eHilton, unikezwe okhiye bemoto yakhe entsha ceke yohlobo lwe Hyundai i10 Glide izikhulu zakwaSpar ose-Selgro Centre maphakathi nedolobha laseMgungundlovu.
Igama likaNcalane litonyulwe emingenelweni yalomncintiswano engaphezu kuka 500 yabathengi bakulesitolo sokudla selokhu lomncintiswano waqala mhlaka 19 ku Ephreli nonyaka.
Lomncintiswano ungowaminyaka yonke uhlelwe ekomkhulu lakwa Spar lapho linikezela khona ngezimoto ezingu­ 100 koSpar abakhethekile kwabangu 500 kuleli.
Ngijabule kakhulu ngiyaqala ngqa ukuwina into emncintiswaneni futhi bese ngizitshela ukuthi angiyena umuntu onenhlanhla ngoba bengihlale ngingenela kodwa ngingatholi lutho,” kusho uNcalane othe lena imoto yakhe yokuqala.
Uthe abakwa Spar bamuthinte ngocingo esikhathi ngeviki eledlule bemazi ukuthi kutonyulwe igama lakhe.
“Bengingakholwa ukuthi yimina ngempela owinile, ngike ngazitshela ukuthi kungenzeka mhlawumbe benze iphutha kodwa manje uma imoto sengiyibona sengiyakholwa.”
Eqhuba uthe lemoto izomsiza kakhulu njengoba yena nengoduso yakhe behlela umshado wabo.
“Izosisiza kakhulu ngoba ziningi izindawo ekufanele sizihambe, sesizokwazi nokuthi sizitetemukele nje ngayo sihambe nezindawo,” kusho yena ehleka.
Imenenja yakwa Spar u-Abigail Mhlamvu obehalalisela uNcalane uthe lomncintiswano ube yimpumelelo enkulu, “Isasasa belilikhulu ngalomncintiswano. Sibe nen-hlanhla yokuthi uSpar wethu nawo ukhethwe ekutheni uphisane ngemoto. Isikhathi esiningi uma sinemincintiswano abathengi bake bacabange ukuthi sidlala ngabo, namhlanje besifuna bazibonele ukuthi sisuke siqinisile kungekona ukuthi sifuna bathenge impahla.”